Tekinoroji & Mushure mekutengesa sevhisi - Nanjing Yakaberekwazve Nyowani Zvishandiso Co., Ltd.
Nanjing Reborn Nyowani Zvishandiso Co, Ltd inogara ichitora kudiwa kwevatengi sekutungamira kwekuyedza, kuomerera "Iko kwakanaka kwekutarisira manejimendi, Hunhu hwekutanga, mutengi ndiye akakwirira" seyakagadziriswa mutemo, simbisa kuzvivaka. Uye takazvipira kupa yepamusoro-soro uye yakakwana rutsigiro masevhisi kuona yakanaka yekutenga ruzivo kune vashandisi
Naizvozvo, isu tinovaka yakakomba mushure-yekutengesa system:
Gadzira yakanaka mushure-yekutengesa sevhisi pfungwa, isu tinovimbisa kuita basa rakanaka rekudzidzisa kune vashandi, kuvandudza yavo chigadzirwa ruzivo, ruzivo rwebasa uye mushure-yekutengesa sevhisi nhanho.
Mahara epamhepo kuraira: E-mail, runhare technical technical services;
Gadzira faira rakazara kune wega mutengi:
shandisa zvakagadziriswa manejimendi, kubva pakutanga kutaurirana, kutengesa, kuendesa kusvika kwekupedzisira kushandiswa, uye uve nechokwadi chekuti nhanho yega yega yakakwana.
Ziva vatengi zvakanaka:
dzidza izvo zvakasarudzika zvevatengi kuburikidza neumwe kune mumwe wakasarudzika sevhisi, pindura kune izvo zvinodiwa, uye batsira vatengi kugadzirisa matambudziko avo.
makore aya, musika wemakemikari uri pasi pekushandurwa kukuru, saka mutengo wemusika uye kuendesa zvinoshanduka nekukurumidza. Isu tichaudza vatengi vedu pamberi pezvinhu zvakasvibirira uye nemitengo shanduko, kuti vakwanise kunzwisisa musika zvakanaka, uye vagadzire zvakakwana kugadzirira kwekutengesa mune ramangwana.
Zvine mutoro zvigadzirwa mhando:
dzora chigadzirwa chigadzirwa kubva kune yakasvibirira sosi sosi, uye ita basa rakanaka rehunhu bvunzo usati wasununguka, kuona kuti chigadzirwa chinosangana nezvinodiwa nevatengi.
Isu tine timu yehunyanzvi yehunyanzvi, iyo inogona kupa yakakwana tekinoroji rutsigiro munguva. Uye batsira kugadzirisa matambudziko mukushandisa, kunatsiridza chigadzirwa fomula kuti uwane iyo tarisiro mhedzisiro.
Panguva imwecheteyo, isu zvakare tinoshanda pamwe neYunivhesiti, tichichengetedza kuvandudza mhando yechigadzirwa, kutsvagisa uye kugadzira zvigadzirwa zvitsva, kushandiswa kutsva.
Isu tinopawo masevhisi akazara ekuvandudza kune dzimwe nyika uye kubatanidzwa uye kuwanikwa kwemabhizinesi emhando yepamusoro.